Tim Cook, oo ah agaasimaha guud ee uusan "qofna shilin dina" | Wararka IPhone
Waxaan aqrinay baryahan dambe muuqaalka usbuuca, waana in Apple ugu dambeyn ay ku guuleysatay inay iibiso iphone-keeda hal bilyan, waxayna ku degdegeen inay la kulmaan shaqaalaha Cupertino, iyo sidoo kale akoonada maamulayaasha ugu muhiimsan ee shirkada laga dhawaajiyay. warka. Si kastaba ha noqotee, waxaa la joogaa waqtigii lagu dhaqmi lahaa munaafaqnimada, waxaa la joogaa waqtigii qof uu u eegi lahaa Tim Cook indhaha oo uu raali gelin ka bixiyo aaminintiisa, waligiis ... Laga yaabee inuusan noqonin agaasimaha guud ee warbaahinta ee shirkadda, laakiin shaki la'aan, tirakoob ahaan wuxuu noqday kan ugu fiican. Aynu wax yar ka hadalno Tim Cook, oo ah agaasimaha guud ee Apple ee aan cidina siin wax shilimaad ah, oo ka mid ah dadka xidhay afafka ugu badan taariikhda.
1 Tani iyada oo Jobs aysan dhicin
2 Xaqsoor ahaan, xog xaqiiqo ah
3 Ballanqaadka bulshada iyo bey'ada
4 Tim Cook, waaxda Steve Jobs
Tani iyada oo Jobs aysan dhicin
Hadday i siiyeen hal euro markasta oo aan akhriyo / maqlo oraahdan faraxsan. Iyada oo aysan shaqooyinku dhicin, Maamulaha guud ee shirkadda, ha ku nasto nabadgelyo, wuxuu suuqa ka bilaabay qalab aan helin caymis sababo la xiriira dhibaatada heerka koowaad ee GBS. Tani waxay la timid Jobs ma dhicin ... mana qori doonno faahfaahin dheeri ah, sababtoo ah in laga naco shaqada baaxada leh ee Steve Jobs la qabtay Apple waxay iila muuqan doontaa ceeb aniga, markii ugu sarreysay ee laga leexinayo shaqada Tim Cook wuxuu ku sameeyay Cupertino, isagoo jabiyey xukunka "Tani waxay la timid Shaqooyin ma aysan dhicin ...".
Xaqsoor ahaan, xog xaqiiqo ah
Rajada ah in Apple hoos udhacdo uusan joogsan, falanqeeyayaasha kahortaga baarka ayaa saadaaliyay usbuucii la soo dhaafay hoos u dhac ku yimid saamiyada Apple ee u dhexeeya 18 iyo 25% wax yar uun ka dib soo bandhigida xogta Q3, "Xumbada tufaaxa" kuwa kale ayaa ugu yeera. Si kastaba ha noqotee, markii uu xirnaa suuqa saamiyada, saamiyada Apple waxay ka qiimo badnaayeen boqolkiiba laba. Waxaa laga yaabaa in shaqooyin ahaan taasi aysan dhici doonin. Tim Cook wuxuu saxeexay rikoodhada ugu waxtarka badan ee xagga dhaqaalaha iyo kuwa caanka ah ee taariikhda shirkadda, mana jiraan wax yar oo si dhakhso ah ugu falanqeeya si masiixiyan ah maxaa yeelay "tufaaxu hoos buu u sii socdaa", hase yeeshee, Apple maanta waxay ku jirtaa sannadkeedii labaad ee ugu fiicnaa taariikhda. Sannad-maaliyadeedkii ugu fiicnaa taariikhda ayaa ugu dambaysay, markii la bilaabay iPhone 6, waxaanan idin xusuusinayaa, tan iyada oo Jobs la qaban may dhicin, miisaaniyaddaas waxaa sidoo kale saxeexay Tim Cook.
Ballanqaadka bulshada iyo bey'ada
Apple hadda waxay ka mid tahay shirkadaha saamaynta ugu yar ku leh deegaanka, mana xuma, iyadoo la tixgelinayo inay tahay shirkad macaamiisha elektaroonigga ah. Halka kuwa kale sida Twitter iyo Amazon ay ku dhacaan imtixaanka Greenpeace, shirkadda Cupertino waxay ku jirtaa hoggaanka adeegsiga tamarta nadiifka ah, yareynta saameynta deegaanka ee ficil ahaan eber. Intaas waxaa sii dheer, waa hormuudka dadaallada dhiraynta dhowr ah ee Shiinaha, oo ah waddan wasakheynta iyo faddaraynta ay gaareyso heerar aan horay loo arag.
Tim Cook kama baqayo warbaahinta, agaasimaha guud ee shirkada ugu qiimaha badan meeraha ma qarin khaniisnimadiisa ama taageerada uu u hayo bulshada LGBT. Xaqiiqdii, maalinta "khaniisnimada" sannadkan, Apple waxay sii daayeen kooxo xusuus u leh Apple Watch, iyo sidoo kale mashaariic iyo aasaasyo taxane ah oo lahaa taageerada, aaladaha iyo lacagta shirkadda ay u ololeeyaan. Tim Cook. Waxaa laga yaabaa in ... tan Jobs aysan dhicin sidoo kale.
Tim Cook, waaxda Steve Jobs
Tim Cook kuma uusan dhicin cagihiisa, dhab ahaantii, wuxuu caan ku ahaa Cupertino, oo aan aad loogu aqoon saxaafadda. Steve Jobs ayaa shaqsiyan isaga u doortay inuu noqdo badalkiisa, midkii loo doortay inuu shirkadda sare geeyo, wuuna yeelay. Hase yeeshee Steve oo wanaagsan ayaa wax ku arkay Tim Cook oo shaqaalihiisii ​​shaqaaluhu arki waayeen. Magacaabista Tim Cook waxay ku lug laheyd faallooyin taxane ah iyo soo koobidda weedho taas, oo ka fog daciifinta Tim Cook, isaga ka dhigtay mid xoog badan. Hambalyo Cook.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Tim Cook, oo ah agaasimaha guud ee uusan "qofna siinin wax dinaar"
Sawir qaadaha Alex Mayorga dijo
Maqaal aad u wanaagsan, laakiin waxaad ugu yartahay ee aad ka tiri wuxuu ahaa wixii Cook uu sameeyay ee aysan Shaqooyinku qabanin waqtigiisa. Adigu waxaad dul saartay cinwaanka, laakiin ma aadan dhigin waxqabadkiisa hoggaanka shirkadda. Waad ka fiicnaan laheyd inaad ka hadasho qeybta sharciga ee Apple qareen ahaan inaad tahay, tusaale ahaan, khilaafaadka aad la gasho Samsung ee ku saabsan shatiyada iyo sidoo kale Xiaomi.
Jawaab Alex Mayorga
Hagaag, weli ma siinayo shilimaad isaga ah, weligay ma aanan jeclayn waligayna ma jeclaan doono isaga oo ah Agaasimaha Guud
HALKAN Khariidadaha ayaa ah HALKAN WeGo